ရေကြက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေကြက် (common moorhen) (Gallinula chloropus) သည် အမည်နှင့်လိုက်အောင် ရေတွင် ကျက်စားသော ငှက်မျိုးဖြစ်ပြီးလျှင် ရယ်လီဒီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ယင်းကို သတ္တဗေဒ (ပါဏဗေဒ‎) အလိုအရ ဂယ်လီနျူလာကလိုရိုပတ် ဟူ၍ခေါ်သည်။ ရေကြက်သည် ကိုယ်အလျား ၁၂ လက်မရှိ၍ ရေကူးရာတွင် ခေါင်းကို ညိတ်ကာညိတ်ကာ ကူးလေ့ရှိသည်။ အမြီးကိုလည်း အဆက်မပြတ် ပင့်တင်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အမြီး၏ အောက်ဘက်ရှိ အဖြူကွက်များကို မြင်နိုင်လေသည်။ အစိမ်းရောင်ရှိသော ခြေထောက်များတွင် အနီရစ်ရှိခြင်းနှင့် အနီရောင်နှုတ်သီးဖျားတွင် အဝါရောင်ရှိခြင်းတို့သည် ရေကြက်၏ ထူးခြားသောလက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။
ရေကြက်၏အော်သံသည် ကျယ်လောင်စူးရှ၍ ရုတ်တရက် လန့်ဖျပ်အော်လိုက်သည်နှင့်တူသည်။ အော်သံကို အတော်ဝေး ဝေးမှပင် ကြားနိုင်လေသည်။ ရေအစဉ်မပြတ်ရှိ၍ ကိုင်းပင်များ ထူထပ်စွာ ပေါက်နေသော နေရာမျိုးတွင် နေလေ့ရှိသည်။ ရေကြက်သည် ထုံးအိုင်များတွင် နေလေ့ရှိသော ငှက်မျိုးဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလန်ပြည်မှာကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ၊ မြစ်များနှင့် ချောင်းများတွင် တွေ့ရခဲသည်။ ရေတွင်ပေါက်ရောက်နေသော အပင်များကြားတွင် ရေကြက်သည် သွားလာလျက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ရေပိုးရေမွှားများကို စားနေလေ့ရှိသည်။ ရေကြက်သည် ရေကူးကျင်လည်ပြီးလျှင် ရေတွင်လည်း ကောင်းစွာ ငုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံသောအခါတွင်မှသာရေတွင် ငုပ်လေ့ရှိပုံရသည်။ ရေစပ်ရှိ ကုန်းပေါ်သို့လည်း တက်၍ အစာရှာစားလေ့ရှိသည်။ ကုန်းပေါ်သို့ တက်၍လည်း သွားလာလေ့ရှိသည်။ သစ်ပင်များပေါ်တွင်လည်း ရေကြက်သည် နားလေ့ရှိသည့်အပြင် သစ်ကိုင်းများကို တစ်ကိုင်းပြီးလျှင် တစ်ကိုင်း ကျင်လည်စွာ ကူးသွားနိုင်သည်။ ပျံရာတွင် လေးလံပြီးလျှင် အားထုတ်၍ ပျံရပုံရှိသည်။ ပျံသောအခါ ရေပြင်နှင့် ကပ်၍ ပျံလေ့ရှိပြီးလျှင် လည်တံနှင့် ခြေထောက်များကို ဆန့်တန်း၍ ပျံလေ့ရှိသည်။
ရေကြက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များရှိ သင့်တော်သောထုံးအိုင်များတွင် မိုးဥတုအတွင်း၌ သားပေါက်လေ့ရှိသည်။ အသိုက်ကို ရေတွင်ပေါက်သည့် ဆွေးမြည့်နေသော အပင်များ၏ ပင်စည်ရိုးများ၊ အရွက်များနှင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ရေကြက်၏အသိုက်များကို ချုံများပေါ်တွင်၎င်း၊ သစ်ပင်များပေါ်တွင်၎င်း၊ ရေပေါ်၌ မျောနေကြသည်၎င်း တွေ့နိုင်ပေသည်။ တစ်မြုံလျှင် ခြောက်ဥမှ ကိုးဥအထိ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ ၁၄ ဥအထိပင်ရှိတတ်သည်။ ဥ၏အရောင်မှာ အညိုပျော့ရောင် ဖြစ်ပြီးလျှင် နီညိုရောင်နှင့် ခရမ်းရောင်အပြောက်များ ပါရှိသည်။ ရေကြက်သည် ဗြိတိသျှကျွန်းစုတွင် အထူးပေါများ၍ ဩစတြေးလျတိုက်မှတစ်ပါး အခြားတိုက်ကြီးများအားလုံးတွင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ရေကန်ထုံးအိုင်ရှိရာ ဒေသများတွင် ရေကြက်ကို တွေ့နိုင်သည်။ အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်းရာသီ၌ တွေ့နိုင်သော်လည်း မိုးရာသီ၌မူ ရှိပုံမရချေ။ သားလည်း ပေါက်ပုံမပေါ်ချေ။ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အတော်ကြီးသည့် ရေအိုင်များတွင် ရေကြက်များကို တွေ့နိုင်လေသည်။
↑ BirdLife International (2014). "Gallinula chloropus". IUCN Red List of Threatened Species 2014. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကြက်&oldid=709659" မှ ရယူရန်
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။